आज पृथ्वी नजिकैबाट यात्रा गर्नेछ क्षुद्रग्रह, नासाले मान्यो खतरनाक – live 60media
आज पृथ्वी नजिकैबाट यात्रा गर्नेछ क्षुद्रग्रह, नासाले मान्यो खतरनाक
July 24, 2020 admin	0 Comments
एजेन्सी / अमेरिकी अंतरिक्ष एजेन्सी नासाले शुक्रबार एउटा ठूलो एस्टेरोयड (क्षुद्रग्रह) पृथ्वी नजिकैबाट यात्रा गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘२०२० एनडी’ नामको यो एस्टेरोयड करिब १७० मिटर (करिब ५५७ फिट) लामो छ र यो पृथ्वीबाट .०३४ एस्ट्रोनोमिकल युनिट (५० लाख ८६ हजार ३ सय २८ किलोमिटर) टाढाबाट यात्रा गर्नेछ । नासाले यति नजिकबाट यात्रा गर्ने एस्टेरोयडलाई सम्भावित खतराको सूचीमा राख्ने गर्छ । एस्टेरोयडको गती ४८ हजार किलोमिटर प्रतिघण्टा छ ।
नासाका अनुसार ०.०५ एस्ट्रोनोमिकल युनिट वा सोभन्दा कमबाट यात्रा गर्ने एस्टेरोयड पृथ्वी नजिक आउनु खतरापूर्ण हो । यद्यपि, यसको असर पृथ्वीमा पर्छ भन्ने जरुरी छैन ।
हरेक वर्ष ३० एस्टेरोयड पृथ्वीसँग ठोक्किन्छन्ः
द प्लेनेटरी सोसाइटीका अनुसार तीन फिटका १ अर्ब एस्टेरोयड रहेका छन् तर यसबाट पृथ्वीलाई कुनै खतरा छैन । ९० फिटभन्दा ठूला एस्टेरोइडले पृथ्वीलाई निकै क्षती पुर्याउने खतरा छ । हरेक वर्ष करिब ३० साना एस्टेरोयड पृथ्वीसँग ठोक्किन्छन् तर पृथ्वीमा खासै ठूलो क्षती भने हुँदैन ।
पृथ्वी नजिकैबाट यात्रा गरेको थियो एस्टेरोयड ‘२०२० एलडी’:
यसअघि जून ५ मा एउटा एस्टेरोयड पृथ्वीभन्दा १ लाख ९० हजार मिल टाढा भएर गुज्रिएको थियो र कसैलाई यसको कुनै खबर थिएन । एस्टेरोयड ‘२०२० एलडी’ ले पृथ्वी र चन्द्रमाको बीचबाट यात्रा गरेको थियो । वैज्ञानिकका अनुसार यो एस्टेरोइड खासै ठूलो थिएन तर यो सन् २०१३ मा साइबेरियामा क्षती पुर्याउने चेल्याबिन्स्क सेटलाइटभन्दा ठूलो थियो ।
१३ अप्रिल २०२९ मा एउटा ठूलो एस्टेरोयड पृथ्वीसँग ठोक्किने आशंकाः
खगोलविदका अनुसार १६ सय ४० फिट वा सोभन्दा ठूलो एस्टेरोयड एक लाख ३० हजार वर्षको एक पटक पृथ्वीसँग ठोक्किने अनुमान गरिन्छ । १३ अप्रिल २०२९ मा एस्टेरोइड ‘९९९४२ एपोफिस’ पृथ्वीको निकै नजिकबाट निस्कनेछ । यो पृथ्वीसँग ठोक्किन पनि सक्छ वा केही उपग्रहलाई क्षती पुर्याउन सक्छ । यो एस्टेरोयडको आकार ११ सय फिटको छ ।
अर्को एस्टेरोयड बेन्नू हो । यसको आकार १६ सय १० फिट छ । यो सन् २१७५ देखि २१९९ को बीच पृथ्वीको नजिक भएर यात्रा गर्नेछ । नासाले काइनेटिक इम्प्याक्टरमार्फत् यी एस्टेरोयडलाई पृथ्वी नजिक आउनुभन्दा अघि नै नष्ट गरिदिने जानकारी दिएको छ । यसमा एस्टेरोयडको बाटोमा स्पेस क्राफ्ट पठाइनेछ जसले एस्टेरोयडलाई कि त नष्ट गरिदिन्छ कि उनको दिशा परिवर्तन गरिदिनेछ । नासाले यो प्रविधिको पहिलो प्रयोग सन् २०२६ मा गर्ने तयारीमा छ ।
← भाग्यमानीले मात्र देख्ने नागको अण्डा : ॐ लेखी सेयर गरेमा सबै मनोकामना पुरा हुनेछ !
कुवेतमा ३३ नेपाली कामदार अलपत्र, कम्पनीले पाँच महिनादेखि तलव नदिएपछि भोकभोकै ! (भिडियाे सहित) →
एमालेकी नेत्री लिएर बाउ फ’रा’र,बिचल्ली र श्रीमती,न्याय खोज्दै मिडियामा(भिडियो हेर्नुहोस्)
छोराको हात कु’हि’ए’र झर्ने लागिसक्यो, उपचार गर्ने एक रुपैया छैन, छोरो पिठ्युँमा बोकेर च’न्दा माग्दै (भिडियो हेर्नुस)
चटपटे पानीपुरी बेचेरै सैनिक पत्त्निले कसरी जोडिन काठमाडौमा घर र ३ गाड़ी
कठै !यसरी नेपाली चेलीलाई पुर्याइदैछ यौx न अखडा,दुबईमा १३ जना नेपाली चेली यस्तो अवस्थामा फेxला परे (भिडियो हेर्नुस्)
दुबईमा अलपत्र परेका छोरा आइपुग्दा एयरपोर्टमै आमा र श्रीमतीको रुवाबासी|अझै दुई छोराको उतै बिजोग|
काठमाण्डौ बाट बाहिरिन जान नमिल्ने खबरले लाखौको दशैं खल्लो हुने सम्भावना बीच आयो नया खुसीको खबर। असोज २० गतेबाट यस्तो हुँदै,पुरा पढ्नुहोस 25.6k views
भर्खरै हेर्नु कसैले नसोचेको धेरै राम्रो कुरो आयो अब केहि हुन्छ 7.1k views
सडक दुर्घटनामा तेजाको निधन, सुपरस्टार शव हेर्न पनि गएनन् 6.2k views